Angela Ahrendts isonye na World Retail Conference | Esi m mac
Angela Ahrendts isonye na World Retail Conference
Angela Ahrendts, bụ nke ugbu a Apple Nkesa Manager. Taa, anyị amụtala na ọ ga-esonye dịka otu n'ime ndị ọkà okwu na Nzukọ Saleslọ Ahịa Ahịa Globalwa. Ihe omume a na - eme ka ndi oru ahia kachasi elu karia ndi Google na ndi MasterCard. Na omume nke ịdị ukwuu a, anyị ga-ama usoro na usoro ahịa ọhụụ, nke a ga-ebufe na ọnwa ndị na-esote, ma n'ụlọ ahịa anụ ahụ ma na azụmahịa kọmputa. A ga-eme ihe omume afọ a na Tucson, Arizona, n’etiti Eprel 20 na 21.
Onye isi Apple ejidela ọnọdụ ahụ na Apple kemgbe Ọktọba 13, 2013. Mana ọrụ ya bụ imeghari usoro ahia nke Apple Store na 18 mba na ihe karịrị 491 isi nke ire. N'otu oge ahụ ọ na-achịkwa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Apple.
Ọ bụrụ na anyị eleghachi anya azụ, mbinye aka nke apụl lekwasịrị anya na Apple Store dị ka ebe ahịa, kamakwa maka mmụta, ekele maka ọnụ ọgụgụ nke amamihe. Ugbu a isi ụlọ ahịa na-eche maka ọrụ azụmaahịa na-esochi ohere ọdịbendị na agụmakwụkwọ. Ahrendts, onye bụbu onye isi nke Burberry site na 2006 ruo 2013, bụ otu n'ime ụmụ nwanyị 15 kachasị ike n'ụwa.
Anyị anụwo nkwukọrịta site na Nzukọ Azụmaahịa Worldwa, site na akaụntụ @setteBIT
Ruo afọ iri abụọ na otu, Nzukọ Mgbasa Worldwa na-enyekarị ozi bara uru, usoro egosipụtara, na echiche ọhụụ nke na-enyere ndị mmadụ n'otu n'otu na òtù dị iche iche aka ịga nke ọma n'ahịa asọmpi zuru ụwa ọnụ.
A ga-edozi okwu ihu ọha site na Terry J. Lundgren, Onye isi oche nke Macy ugbu a na ọnọdụ ya ga-abụ ụlọ nkwari akụ JW Marriott Starr Pass Resort. Enwere ike ịga mmemme ahụ, tiketi dị site na $ 400 ruo $ 695.
Nwa Apple, emeela a video Nchịkọta nke ọtụtụ ụlọ ahịa Apple, nke kachasị nke ha dị iche iche, ebe ọ bụ na ọ dịghị ụlọ ahịa abụọ bụ otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Angela Ahrendts isonye na World Retail Conference
Apple Watch na-akwado ọnọdụ nke atọ nke ahịa a na-eji ejiji
Spotify gbanahụrụ Apple Music wee rute ndị ọrụ nde 50